Koroona Fayras: Ingiriiska oo 10-ka fiidnimo xiraya baararka iyo maqaayadaha | Somalia News
Koroona Fayras: Ingiriiska oo 10-ka fiidnimo xiraya baararka iyo maqaayadaha
2 Daqiiqadood ka hor
Ra’iisal wasaaraha ayaa tallabooyinkan ka ansixin doona baarlamaanka ka hor inta aanu Khamiista khudbad toos loo daawanayo u jeedin qaranka abbaaro 8:00 fiidnimo.
Arrintan ayaa imaanaysa ayadoo qaylo dhaanta fayraska Covid-19 uu gaaray heerka 4-aad, taas oo macnaheedu tahay in fayrasku uu si “weyn u sii kordhayo.”
Golaha wasiirrada ee Uk ayaa subaxa khamiista kulmi doona ayadoo Boris Johnson uu sidoo kale shir guddoomin doono kulan deg deg ah oo la yiraahdo Cobra – kulankaas oo ay ka soo qayb geli doonaa hoggaamiyeyaasha Scotland, Wales iyo Waqooyiga Ireland.
This post first appeared on BBC Somali - Somali. Read the http://www.bbc.com/somali/war-54245035original article
Previous articleIRAN oo luuqad adag ugu hanjabtay Mareykanka kadib tallaabadii uu qaaday
Next articleMohamed Bin Zayed oo Mareykanka kala hadlay qorshe ka dhan ah Turkey